Sheekh Dirir Oo Tilmaamay Fasaadka Iyo Sida Ay Diinta Islaamku Uga Hadashay - #1Araweelo News Network
Fasaadka noocyadiisa wax ka mid ah ka siyaasadda, Fasaadka hogaaminta bulshada gala ayaa ugu khatarsan, waayo, dadku iyaga ayey ku deydaan.
Hargeysa(ANN)-Sheekh Maxamed Cumar Dirir, ayaa ka hadlay fasaadka hoggaaminta iyo marka laga qabanwaayo Bulshadda, wuxuuna ku baaqay in dadka waanada iyo wax-u-sheegu anfaci waayo ay muhiim tahay in hoggaanku gacan bir ah ku qabtaan oo mujtamaca laga qabto.
Khudbadii Jimcaha maanta, ayuu kusoo qaatay Sh. Maxamed Cumar Dirir, halista dhulka oo la fasahaadiyo, isagoo tilmaamay in Quraanku inna barayo in xumaanta kuwa u waaweyn uu fasaadku ka mid yahay. Fasaadka culimadu marka ay sharaxayaan waxay ku sheegaan in manfacii shay lahaa dhib loo rogo. Shay walba dhib iyo dheef ayuu leeyahay, waxaanu yidhi,
Fasaadka noocyadiisa wax ka mid ah ka siyaasadda, Fasaadka hogaaminta bulshada gala ayaa ugu khatarsan, waayo, dadku iyaga ayey ku deydaan, hadday sharka u hogaamiyaan oo wanaaga ka leexdaan, waa arrimaha keena in ummadahu baaba’aan. Ilaahay SW waxuu tilmaamay iyagoo ereyga fasaadka sheegaya ‘Dadka madaxda wax hogaamiya marka ay meel yimaadaan way kharibaan, dadkii sharafta lahaa hoos ayey u dhigaan, dadkii xumaana sarre ayey u qaadaan.’